We Fight We Win. -- " More than Media ": ကိုမိုးသီး သတင်း
ပြည်တွင်း ထုတ် အင်ပါယာအမည်ရှိဂျာနယ်တခုမှာ ကိုမိုးသီး သတင်းအား မျက်နှာဖုံးသတင်း
အဖြစ် မနေ့ က ဖေါ်ပြထားတာကို တွေ့ ရှိရပါတယ်။ သတင်းမှာ ကိုမိုးသီးနှင့် ဦးအောင်မင်း
တို့ ဆွေးနွေးချက်များကို အခြေပြုရေးထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တလများက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကိုကို က ကိုမိုးသီးအားပြန်လာ လည်ရန်ကမ်းလှမ်းချက် ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ကိုမိုးသီး ဟာ ဦးအောင်မင်းနှင့် ဘန်ကောက်မြို့မှာ
တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ပါတယ်။ အဓိက ဆွေးနွေးချက်တွေကတော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပြန်လည်ဖွင့်ဖြိုးရေးကိစ္စများ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုမိုးသီး မှာ အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များကတော့ မတရားအသင်းကြေညာချက်များပယ်ဖျက်ရန်၊
တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အပြစ်ခတ်ရပ်စဲရေး များပြုလုပ်ရန် ( အထူးသဖြင့်ကချင်ဒေသအတွင် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ရပ်စဲရန်) ၊ ကျန်ရှိနေသောနိင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်။
နိင်ငံရေးအင်အားစုများအားလုံး နိင်ရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ပြုရန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်မင်း ဒုတိယအကြိမ်ထိုင်းနိင်ငံအခြေစိုက်အင်အားစုများနှင့် လာရောက်တွေ့ ဆုံစဉ်မှာ
ကိုမိုးသီး က ဦးအောင်မင်း၊ ဦးခင်ရီ တို့ နှင့်လဲတယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ 
ဒုတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးမှုတွင် ဦးအောင်မင်း က အကြံပြုချက်အရသမတထံ စာရေးရန် ထပ်မံ
အကြံပြုသဖြင့် ၄ မျက်နှာပါ အကြံပြုချက်တချို့ ကို ကိုမိုးသီး ကရေးသားပေးပို့ ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးအောင်မင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပန်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုမိုးသီး ရဲ့ အမြင်ကတော့ အကောင်းဖက်မှာရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဖက်ဖက်မှာယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ တိုင်းပြည်အခြေအနေများကို ဆိုးဝါးနေတဲ့ အမြန်ဆုံးကုစားနိင်ဖို့ အတွက် နိင်ငံရေးအရပြုပြင်
ပြောင်းလဲမှုများကို လက်တွေကျဖို့ လိုတယ်။ အချိန်မှီ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်။ ဦးနုပြောခဲ့တဲ့
သူမနာကိုယ်မနာမူဟာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ် ဒါကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့သတ္တိရှိရှိ
သဘောထားကြီးကြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Ko Moe Thee,
You should tell bravely that if you want to go back, just say you want to go back... Don't make up that others ask you to go and you have to because of other... Beaman and bealeader if you areaman and leader... But I don't think so and so are people from Myanmar...
14 July 2012 at 08:43
ဒီလို စောက်ရူးကိုလဲ ပြန်လာဖို့ခေါ်တာပဲလား
မိုးသီးဆိုတဲ့ ငနဲက လူပါးကြီးပါ အနေချောင် အစားချောင် နေရာအချောင်ရဖို့ ဆိုရင် သူဖင် သူများပေးချဖို့လဲ ဝန်မလေးတတ်ဘူး။ လူလိမ် သခိုး အရူးချီးပန်း ငမိုးသီး။
14 July 2012 at 17:33
Of cause every body wants to go back to their home no matter you are good or bad, unless you are an animal that don't know where is your home.
14 July 2012 at 21:03
သမ္မတသိန်းစိန်တို့အဖွဲ့ အမေရိကန်သွားတုန်းက ဖိနပ်စားကျွေးလိုက်တာ မိုးသီးမေ့နေပြီးလား။ ငွေသာရမည်ဆိုရင် ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး လိမ်ဖို့လည်း ဝန်မလေးဘူးဆိုတဲ့ မိုးသီးရေ ခင်ဗျာကြီးသာ တကယ်မြန်မာပြည် ပြန်ရဲရင် ပြန်ပေါ့ဗျား အင်းစိန်ထောင်မှာ အခန်းတခန်းကြိုတင် ဘိုကင်လုပ်သွားဖို့မမေ့နဲ့ အမေရိက ကိစ္စကို ဦးသိန်တို့အဖွဲ့က အစာမကြေသေးဘူးဆိုတာလဲ ထည့်စဉ်းစားဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့ ။
16 July 2012 at 13:09